Yaa’ii hundeessaa fooramii dhaabbilee demokiraasii mootummaa naannoo Oromiyaa taa’amaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Yaa’ii hundeessaa fooramii dhaabbilee demokiraasii mootummaa naannoo Oromiyaa taa’amaa jira
Finfinnee, Mudde 25,2011(FBC)-Wixineen sirna gurmaa’insaafi hojimaata waliinii dhaabbilee demokiraasii mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa’e irratti magaala Adaamatti mari’atamaa jira.
Mootummaan hojiilee ijaarsa sirna Demokiraasii cimsuu, hojiirra oolmaa sirna paartii hedduu dhugoomsuu, dirree siyaasaa bal’isuufi dhaabbilee demokiraasii naannoo keenya keessa jiran cimsuuf tarkaanfiiwwan garaa garaa fudhachaa jiraachuu Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Addee Loomii Badhoo ibsaniiru.
Addee Loomiin haasawaa hundeeffamaa fooramicha irratti taasisaniin, dhaabbilee demokiraasii sadarkaa naannoo Oromiyaatti gurmaa’anii socho’an mirgoonni demokiraasiifi namoomaa lammiilee akka hin sarbamneef, olaantummaan seeraa akka kabajamu, mirgi filachuufi filatamuu lammiilee akka dhugoomuufi sirna paartiilee hedduu ijaaruu keessatti gaheen qaban olaanaa jedhaniiru.
Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa sirna itti gaafatamummaa hojiirra oolchuuf dhaabbilee demokiraasii itti waamamni isaanii Oromiyaaf ta’an itti gaafatamummaa qaban sirnaan bahachaa jiraachuu isaanii yeroo kamuu caalaa sirna diriiree jiruun Caffeen kan hordofuufi too’atu ta’uu hubachiisaniiru.
Yaa’ii hundeeffama magaalaa Adaamaatti taa’amaa jiru kanarratti wixineen sirna gurmaa’insaafi hojimaata waliinii dhaabbilee demokiraasii mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa’e Waajjira Caffeetti Gorsaa Olaanaa Dhimma Seeraa kan ta’an Obbo Addisuu Malaakuutiin dhiyaatee irratti mari’atamuun ni raggaasifama jedhamee eeggama.